Thailand waxay u ogolaataa inta badan hemp iyo xashiishka cuntada iyo qurxinta • Daroogada Inc.eu
Dowlada Thailand ayaa qorsheyneysa inay u ogolaato inta badan qeybaha hemp iyo dhirta xashiishka in loo isticmaalo cuntada iyo qurxinta Sidaas waxaa ku dhawaaqay Xoghayaha Caafimaadka.
Xoghayaha Kiattiphum Wongrajit ayaa yiri Guddiga Xakamaynta Maandooriyaha Talaadadii waxay go'aansatay inay ka saarto caleemaha, laamaha, jirridaha, jirridda, jilifyada, fiilooyinka iyo xididdada xashiishka iyo hemp liiska dowladda ee maandooriyaha.
Liiskan kuma jiraan laamo, oo ay ku jiraan ubaxyo, oo leh maado daroogo aad u sarreeya. The Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) waa inuu sameeyaa sharci cusub oo caafimaadka dadweynaha ah, ka dib Wasaaradda Caafimaadka ayaa ansixin karta xeerkan cusub.
1 In ka yar 0,2% THC
2 Xashiishad koraya
In ka yar 0,2% THC
Dr. Kiattiphum wuxuu sheegay isticmaalka abuurka hemp iyo soosaarida abuurka, sidoo kale cannabidiol (CBD) iyo tetrahydrocannabinol (THC), oo leh waxyaabaha ugu badan ee ah 0,2%, sidoo kale waa lagu dari doonaa. Waxyaabaha la oggol yahay iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin waxay ka imaan karaan oo keliya ururada wax soosaarka ee idman, dhakhaatiirta, jaamacadaha, ganacsiyada bulshada iyo iskaashatooyinka bulshada. Xoghayaha guud ee FDA Paisal Dunkhum ayaa sheegay in siyaasada cusubi ay xooga saarayso isticmaalka xashiishka iyo hemp ee loo isticmaalo shakhsiga iyo daryeelka caafimaadka. Waxay sidoo kale rabaan inay adeegsadaan qaabab badan oo loogu talagalay soo saarista dharka, dharka, daawooyinka iyo wax soo saarka dhirta.
Beerista maandooriyaha xashiishadda waxaa loogu talagalay oo keliya dadka horey u helay rukhsadda ay ku abuurtaan xashiishadda iskaashatooyinka ama shirkadaha loo oggol yahay inay soo saaraan xashiishka. Ma jiro wax xadidan oo loo qabo tirada dhirta xashiishka ee ay kori karaan.
Akhri wax dheeraad ah bangkokpost.com (Source, EN)
Faransiiska yar yar ee isticmaaleyaasha cannabis
Baarlamaanka Faransiiska ayaa u codeeyay ganaax lacageed oo dhan 200 euro oo ah isticmaalka ...
Tripsters waxay noqdaan hibo
Waxaa qoray mr Kaj Hollemans, KH Talobixinta Sharciga (@ KHLA2014). Hallucinogens waa kulul. Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa ku hawlan microdosing: ...
Marijuana waa inay hadda sharci ka noqotaa New Jersey, laakiin maahan
Marijuana waxay sharci ahaan ka ahaan lahayd New Jersey bilowga Sannadkan Cusub ee 2021, laakiin ...